गरिब, असहाय र दीनदुःखीको सहयोगी बन्दै मेघा | Citizen Post News
काठमाडौं । नर्भिक अस्पतालकी निर्देशक मेघा चौधरी शाक्य पछिल्लो समय उनले गरेको विभिन्न सामाजिक कामका कारण चर्चामा छिन् । मेघाले बाटोमा देखिएका विरामी, असहाय र रकम अभावका कारण उपचार हुन नसकेका विरामीलाई आफ्नै अस्पतालमा लगेर निःशुल्क उपचार गर्ने, बाटो सडक-पेटीमा बस्ने गरिब, असहाय, दीनदुःखीलाई औषधी-उपचार गर्ने मात्र नभई खाना र न्यायो कपडा वितरण गर्नेजस्ता कामहरु गरेकै कारण पछिल्लो सयम उनले गरको कामप्रति सवैको ध्यान केन्द्रित भएको छ ।
हुन त, समाज सेवा धन मात्र भएर हुन्न, मन पनि चाहिन्छ । यो समाजमा दिनरात पैसा-पैसा भन्दै रकम गनेर बस्ने पनि भेटिन्छन् । उनीहरुलाई समाज र मुलुकले न चासो राख्छ न त चिन्छ नै । शान्त स्वभाव, सहयोगी भावना, मिलनसार बानी र मनकारी मन भएकी मेघा सामाजिक काममा खुलेर आउन चाहिँरहेकी छन् । हिजोआज, पैसा नहुने असहाय, अपांग, दीनदुःखीहरुका लागि उनी भगवान सरह भएकी छन् । उनले नर्भिक अस्पतालमै निःशुल्क उपचार गराएपछि धेरैको अकाल हुने मृत्यु टरेको छ ।
मेघा भन्छिन्, 'असहाय, गरिब र दीनदुःखीलाई आफ्नो अस्पतालमा उपचार हुन नसके अन्य अस्पतालमा लगेर पनि उपचार गर्ने गरेकी छु ।' उनले गरिब, असहाय र दीनदुःखीहरुका लागि निःशुल्क उपचार त गरेकै छिन् । त्यसका बाबजुद उनी विभिन्न आश्रममा पुगेर होस् या पुष-माघ महिनाको चिसोमा सडकपेटीमा रात विताउने बृद्धबृद्धा आमाबुबालाई न्यायो बनाउन, खान खुवाउन पनि उनी सक्रिय भइन । आफ्नो व्यवसायीक व्यस्तता र थकानलाई वास्ता नगरी उनी लगातार समाज सेवामा लागेकी छन् । उनीमा आफु धनि र ठूलो मान्छे भएको कति पनि घमण्ड छैन । सवैलाई समान ब्यवहार गर्ने मेघाको बानी देखेर अस्पतालका कर्मचारी नै ढंग छन् ।
मेघा भन्छिन्, 'मलाई समाज सेवा गर्ने प्रेरणा आफ्नै बाबाबाट मिलेको हो । सानैदेखि सामाजिक काममा मेरो रुचि थियो । बाबा, हामी सवैले 'बसन्त चौधरी फाउण्डेसन' बाट भूकम्प गएको बेला धेरैलाई सहयोग गरका थियौं ।' तर, आफुले गरेका सामाजिक कामलाई सञ्चारमाध्याममा ल्याउन भने उनलाई फिटिक्कै मन नपर्ने बताइन । कारण खोल्दै भनिन्,'हामीले सामाजिक काम गरेको पनि नकारात्मक सोचबाट हेर्ने मान्छे छन् यो समाजमा । नर्भिक अस्पतालमा महंगो शुल्क लिन्छौं भन्ने आरोप लाग्छ । तर म के भन्छु भने हाम्रो सेवा उच्चस्तरिय छन् । हामीले महंगो शुल्क लिएका छैनौं ।'
भावुक हुँदै भनिन्, 'तपाई आफै भन्नुस्, साधारण चिया पसलमा एक कप चियाको १० रुपैयाँ पर्छ, क्याँफेमा जादा त्यही चिया १०० रुपैयाँ र ठूला स्टार होटलमा गएपछि ५ सय रुपैयाँ पर्छ । त्यो किन भयो भन्दा सेवा, सुविधाकै कारण हो नि । आँखिर पिएको त एक कप चिया हो नि हैन ?' अस्पतालले दिएको सेवा र सुविधा अनुरुप सरसफाई, आधुनिक उपचार पद्धति जस्ता कारणले केही महंगो मात्र पर्न गएको उनले स्पष्ट पारिन ।
उनी भन्छिन्, 'समाज सेवा र व्यवसाय नितान्त फरक विषय हुन् । हरेक अस्पतालमा असहाय, गरिब, अपांगलगायतका बर्गहरुलाई निःशुल्क औषधी-उपचार गर्ने नियम छ । प्रायजसो अस्पतालले त्यो नियम कागजमा मात्र सिमित पारेका छन् । सवै अस्पतालले इमान्दारिता देखाउने हो भने धेरै असहाय, गरिब, दीनदुःखीहरुले अकालमा मृत्युवरण गर्नु पर्दैन ।'
उनले आगामी दिनमा अस्पतालले गरिब, असहाय. अपांग र विभिन्न बर्गलाई लक्षित गरी निःशुल्क औषधी उपचारसहितको स्वास्थ्य शिविर गाउँगाउँमा लैजाने सोच बनाएको पनि खुलसा गरिन । उनकै व्यक्तिगत पहलमा भारतको इन्दिरागान्धी अस्पतालमा क्यान्सर पीडित ४ बर्षीय बालिका कृष्टिना सुनुवारको उपचार गर्न प्रयास भएको थियो ।
उपचारको याचना गर्दै उनका अभिभावकले छोरी बचाउन सहयोग मागेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि उनले उपचारका लागि तत्परता देखाएकी थिइन । सडक-पेटीमा वेवारिसे विरामी देखेँ उपचारका लागि उठाएर उनले अस्पताल लैजाने गरेकी छन् । उनको अभियानलाई सामाजिक अभियन्ता दुर्गानाथ दाहालले पनि साथ दिइरहेका छन् । र, उनले आउँदा दिनमा थप योजनासहित सामाजिक काममा लाग्ने पनि बताइन् । उनी उद्योगपति एवं साहित्यकार बसन्त चौधरीकी सुपुत्री हुन् ।